A Christmas Card to the One You loved! | ~ Merry Christmas! ~
ကိုယ်ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီသို့ အမှတ်တရ ခရစ္စမတ်ကတ်တစ်စောင်………။
ခရစ္စမတ်ကာလမှာ ခရစ္စမတ်ကတ်များကို ကိုယ်ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့လူတွေဆီပို့တာဟာ အလေ့အထတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ….။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူအများစုဟာ ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆီကို ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ခရစ္စမတ်နေ့နှင့်အတူ နှစ်သစ်အခါသမယအတွက် ဆုတောင်းပေးတဲ့ အနေနဲ့ ဒီလို ခရစ္စမတ်ကတ်တွေကို ပေးပို့ကြတာပါ…။ ခရစ္စမတ်ကတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။
ယခုခေတ်မှာတော့ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ အရင်ကလို စာတစ်တန် ပေတဖွဲ့ကြီး ရေး၊ ခရစ္စမတ်မတိုင်ခင် တစ်လလောက်အကြိုကနေ စာတိုက်ကနေ ခရစ္စမတ်ကတ်ကြီးကို ထည့်ပြီး ပို့စရာမလိုတော့ပါဘူး….။ E-card လို့ခေါ်တဲ့ Electronic Card တွေကို အသုံးပြုပြီး ပို့နိုင်ပြီမို့ အချိန်ပေးစရာလည်း မလိုတော့ပါဘူး…။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အရာတွေ၊ ဆုတောင်းစကားတွေ၊ နှစ်သစ်ကောင်းချီးပေးတာတွေကို အဲ့ E-card ဆိုတာကပဲ ထည့်သွင်း ပေးပို့နိုင်ပါပြီ….။ အဲ့လိုပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့… သင်ပေးပို့လိုတဲ့လူမှာ ( သင့် E-card ကို လက်ခံမယ့်သူမှာ) E-mail address တစ်ခုရှိရမှာ ဖြစ်ပြီး သင်ကလည်း အဆိုပါ လက်ခံမယ့်သူရဲ့ E-mail addressကို သိရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါ့အပြင် Internet Connection လည်း ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်…။
အကယ်၍ သင်ဟာ E-card ပို့ဖို့ စိတ်ဝင်စားပြီး မပို့တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ Internet ပေါ်က http://tinyurl.com/howtosendecard ဆိုတဲ့ Website address မှာ လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြစ်အောင် ရှင်းပြထားလို့ သွားရောက်လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်…။
အောက်ပါ Website များကနေတဆင့်သင်ဟာ E-Card ပို့ဖို့ အဆင်ပြေဆုံးနဲ့ အလှပဆုံး E-card များရရှိ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ (နာမည်ကြီးပြီး လူသိများတဲ့ www.123greetings.com ဟာ သုံးစွဲဖို့ အခက်တွေ့နေတဲ့အတွက် သတိမထားမိတဲ့၊ လှပတဲ့ e-card တွေ ရှိတဲ့ site တွေကိုပဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။)
ဒီ site ထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲ့အမျှ လှပမှုနဲ့ သေသပ်မှုကို အရင်ဆုံး ခံစားမိမှာပါ…။ အမှန်တကယ်ဆိုရင် ဒီWebsite ရဲ့ Main Page ဟာecard ပို့ဖို့အတွက် အထူးရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး…။ ဒါပေမယ့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေအထားနဲ့ပဲ ပါဝင်ထားတဲ့ E-card ပို့တဲ့ Categories မှာတော့ Christmas ရဲ့ အပြင်အဆင် အပြည့်အစုံနဲ့ လှပစွာ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်…။ Christmas မှာ သင့်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူ ခင်သူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကျေနပ်စရာ e-card တစ်ခု ပို့ပေးနိုင်အောင် ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်မှာပါ…။
Greeting for Every Celebration လို့တော့ အခု site ကဆိုထားပါလေရဲ့…။ ဟုတ်ပါတယ်….။ အခုကျရောက်မယ့် Christmas မှာ သာမက တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ ကျရောက်မယ့် ပွဲတော်တွေ၊ အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေ၊ မွေးနေ့တွေမှာပါ E-card ပို့နိုင်ပါတယ်…။ အဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ လှပတဲ့ E-card တွေကို အလွယ်တကူနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပို့ချင်တဲ့ အခါတိုင်း ဒီ dgreetings ကို မမေ့ထားသင့်ပါဘူး…။
Birthday E-card လို့ ဆိုထားပေမယ့် Christmas အတွက်လည်း E-card တွေကို ပို့ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ခရစ္စမတ် ဘိုးဘိုးကြီး Santa Claus နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟာသလေးတွေ၊ သမင်တွေ နှင်းလူသားတွေပါဝင်တဲ့ ပြုံးစရာလေးတွေကို E-card အဖြစ်ကြည့်ရှုရတဲ့ သင်ကော…သင့်သူငယ်ချင်းပါ ကြိုက်နှစ်သက်မိမှာပါ…။ ဒါပေမယ့် အချို့သော E-card တွေမှာ ကလေးတွေကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တဲ့ အရာလေးတွေ အနည်းအကျဉ်းပါနေတာကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်အနည်းငယ် ဖြစ်မိပါတယ်…။ အများစုကတော့ ကလေးတွေအတွက် ကာတွန်းလေးတွေပါပဲ…။
ခရစ်တော် ယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ e-card တွေကို အဓိကထားဖွဲ့စည်းထားတာမို့ လူကြီးတွေအတွက် အလွန်အဆင်ပြေမှာပါ…။ ဒီsiteမှာ လွမ်းမောစရာ၊ ပျော်ရွှင်စရာ၊ ကြည်နူးစရာ၊ စတဲ့ ရသစုံလင်တဲ့ e-card တွေကိုစုံစုံလင်လင် နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာမို့ သင့်အနေနဲ့ ရွေးချယ်ရခက်ကောင်းခက်နေနိုင်ပါတယ်…။ အခြား Categories တွေရှိသေးပေမယ့် အခုကျရောက်မယ့် Christmas အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ Animation တွေနဲ့အတူ e-card တွေကို ဝေေ၀ဆာဆာ ပြသထားတာမို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်…။
ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိ စိတ်တိုင်းကျ e-card တစ်ခုကို ဖန်တီးလို့ရတာပါပဲ…။ website ထဲမှာတော့ အားလပ်ရက်များ၊ ကမ္ဘာကျော်နေ့ရက်များ ၊ အကြောင်းအရာမျိုးစုံသော အရာများနဲ့ e-card များပေးပို့လို့ ရအောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Website အပြင်ဆင်က အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးသယောင် ရှိပြီး E-card တွေက ရိုးရှင်းပါတယ်…။ သို့ပေမယ့် E-card တစ်ခုထဲကိုပဲ လူဆယ်ယောက်လောက်ဆီကို တစ်ပြိုင်ထဲ ပို့လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားတာမို့ စိတ်ကျေနပ်စရာပါ…။
သင်ပို့လိုက်တဲ့ E-card ကို တဖက်ကလူက Print ထုတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်………. အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Website တွေကို အသုံးပြုရင်တော့ လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး…။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အထက်က Website မှာ ရှိတဲ့ E-card တွေကို Flash နဲ့ဖန်တီးထားလို့ပဲ…။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ site ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ Print ထုတ်နိုင်တဲ့ E-card လေးတွေကို သင့် Email ကနေတဆင့် သူ့ထံပို့လို့ရမယ်…။ သူလည်း Print ထုတ်ပြီး အမှတ်တရ သိမ်းထားလို့ ရသွားမှာပါ…။ ဒါ့အပြင် Christmas မှာ ၀ယ်မယ့် ပစ္စည်းစာရင်းအတွက်ကို Xmas Lists & Holiday Planners ဆိုတဲ့ Tag မှာ ရယူနိုင်ပါသေးတယ်…။
(Note: အထက်ပါ Flash နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ E-card တွေကို ကြည့်ရှုဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေးပို့ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ Adobe Flash Player ရှိရမှာ ဖြစ်ပြီး မရှိခဲ့ရင်တော့ http://tinyurl.com/getflashplayer မှာ သွားရောက်ပြီး download ဆွဲနိုင်ပါတယ်…။)
Get more love from your beloved!
Tags: christmas card, ecard